Caafimaadka Marijuana iyo Vets PTSD Qareenka Peoria, IL | Thomas Howard
Gobolku wuxuu ka mid yahay 31 gobol oo oggolaanaya isticmaalka xashiishadda dadka qaba xaaladaha caafimaad. Xashiishadda caafimaad iyo aaladeedii ayaa hadda loo isticmaalay in lagu daaweeyo xaalado badan oo kala duwan, sida cudurka Crohn iyo cudurka 'glaucoma'. Waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, sida ubaxyo la qalajiyey, waxyaabaha caleenta ah, iyo caanaha.
Sanadkii 2013, gudoomiyaha gobolka wuxuu saxeexay Sharciga Barnaamijka Xannaanada Caafimaadka ee Cannabis kaas oo u oggolaanaya beerista, iibinta iyo adeegsiga xashiishadda caafimaadka. Marka loo eego sharciga Illinois, marijuana waxaa kaliya loo tixgaliyaa inay tahay sharci markii ay soo iibsadeen bukaan aqoon u leh ama daryeel-bixiye laga iibiyey iibiyaha sharciyeysan oo shati leh.
Bukaanku waa inuu haystaa kaarka xashiishadda caafimaad iyo xashiishadda waa in loo istcimaalaa oo keliya in lagu daaweeyo xaaladda kaarka ku qoran. Barnaamijka, waxaa jira 41 xaaladood oo lagu daaweyn karo xashiishadda caafimaad sida kansarka, HIV / AIDS iyo Cudurka Parkinson, iyo kuwo kale. Sanadkii 2016, barnaamijka ayaa la kordhiyay illaa 2020.
Caafimaadka Marijuana iyo PTSD ee Peoria, Illinois.
Waxaa jiray daraasado kala duwan oo ku saabsan saamaynta xashiishadda caafimaad ee PTSD. Hal daraasad oo lagu sameeyay Xarunta Caafimaadka ee Langone ayaa muujisay in xashiishadda caafimaad ay gacan ka geysan karto dib u soo celinta isku dheellitirka caadiga ah ee anandamide ee dadka qaba cudurka PTSD. Anandamide waa endocannabinoid dabiici ah. Waxaa loogu magac daray erayga '' Sanskrit 'erayga micnihiisu yahay "farxad" ama "farxad," walaxani waxay ku shaqeysaa kobcinta nidaamka endocannabinoid kaas oo nidaamiya dareenka farxadda, cabsida, iyo welwelka.
Erayada fudud, anandamides waxay u dhaqmaan sidii dawooyinka lidka ku ah dabiiciga. Soosaarka caadiga ah ee endocannabinoid wuxuu xaqiijinayaa in dareenka cabsida, welwelka, murugada la habeeyo. Heerarka hoose ee anandamides-ka ayaa kicin kara astaamaha laga helo dadka qaba cudurka 'PTSD',
Caafimaadka marijuana ee PSTD Marka la eego Sharciga Illinois
Sanadkii 2016, gobolka waxaa xukumay Maxkamad Gobol oo ku taal County County Cook si loogu daro PTSD liiska ciladaha loo ogol yahay daweynta marijuana caafimaadka. Tani waxay ahayd kadib markii gudoomiye Rauner uu diiday talooyin dhowr ah oo ay sameeyeen gudi khubaro ah oo ku daraya PTSD iyo xanuuno kale oo ku taxan liiska xaaladaha lagu daaweyn karo xashiishadda caafimaad ee barnaamijka ka hoosaysa. Toddobaad ka dib, guddoomiye Rauner wuxuu saxeexay SB 10 oo ay ku jiraan PTSD xaalad shuruud u leh isticmaalka marijuanaata caafimaad. Tani waxay ahayd mid gacan ka geysata caawinta askarta howlgabnimada ah ee wax ka qabata vets PTSD, gaar ahaan kuwa kuwa astaamahoodu aan si fudud loola dhaqmin dawooyinka caadiga ah sida dawooyinka walaaca iyo walaaca ka hortagga.
Vets ee ka cabanaya PTSD waxaa lagula talinayaa inay helaan qiimeyn xirfadeed oo loogu talagalay PTSD taas oo ka mid ah shuruudaha lagu helo kaarka daaweynta marijuana. Kuwa haysta kaararka jira, xaalada waxaa lagu dari karaa liiska shuruudaha loo adeegsado kaarka. Waxa jira rugo caafimaad oo kala geddisan oo ka caawiya ruug-caddaayada codsashada kaarka marijuana caafimaadka ee xaaladooda caafimaad. Vets-ka ayaa u baahan inay taxaddaraan si looga fogaado wixii arrimo ah ee ka imaan kara VA ee aan u aqoonsanayn marijuana inay tahay daaweynta PTSD.
Illinois waxay soo rogtay xeerar adag isticmaalka sharciga ah ee xashiishadda caafimaad. Sidaa darteed waa muhiim in la helo sharciyeyn lagana ogolaado isticmaalka PTSD iyo xashiishadda kahor inta aysan vets bukaanku bilaabin isticmaalka marijuanaato caafimaad xaaladooda. Badanaa dhakhaatiirta xarumaha caafimaadka waaweyni kuma talinayaan xashiishadda caafimaad, taas oo macnaheedu yahay in khubaro caafimaadku ay raadsadaan dhakhaatiir iyagu iyagu iskaa wax u qabso ah, oo sida caadiga ah ku tiirsanaa daawada isku-dhafan, ama weydiiso takhtarkaaga deegaanka inuu kuu gudbiyo.
Inkastoo Shuruucda Illinois wali waxay khaldamaan haysashada marijuana madadaalo, gobolku wuxuu ogolyahay haysashada iyo isticmaalka xashiishadda caafimaad kuwa sita kaararka xashiishadda caafimaad. Daryeel bixiyeyaasha looma oggola inay beero dhirta si loogu isticmaalo daawo. Dhamaan marijuanaada caafimaadka ee Illinois waxay ku koray gudaha gudaha dhowr xarumood oo wax soo beero oo ku baahsan gobolka.